true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 10 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Okujwayelekile yisimo lapho umuntu enokwanda okuqhubekayo noma okuqhubekayo nokwenziwa ngcono komkhiqizo noma imali ayitholayo. Lokhu kusebenza kuzo zonke izingxenye zempilo yomuntu. Uma ubudlelwano bomuntu nomndeni wakhe noma nabantu asebenza nabo buba ngcono, kungashiwo ukuthi useSimweni Esijwayelekile emndenini wakhe noma kubantu asebenza nabo.
Umuntu usebenzisa iFomula Ejwayelekile lapho:
Impilo yakhe uqobo isezingeni noma ekhuphuka kancane kancane.
Usegcwalise iFomula Yesimo Esiphuthumayo futhi wanyukela kwiSimo Sokujwayelekile.
Ifomula Ejwayelekile yile:
Ungashintshi lutho. Indlela ogcina ngayo ukwanda ukuthi awushintshi lutho.
Izimiso zimnene kakhulu.
Esimweni Esijwayelekile, usuyilungu elikhiqizayo nelinikelayo kunkampani yakho, iqembu noma umndeni. Kucatshangelwa yibo yikuthi awudingi abanye ukuthi bakulaye.
Ngaso sonke isikhathi lapho uba nokwanda okuthile endaweni yempilo yakho, kubhekisise kahle bese uthola ukuthi yini eyakwenza kwangcono. Futhi-ke yenza lokho ngaphandle kokulahla (ukumisa okuthile obukade ukwenza) lokho obukade ukwenza ngaphambili. Yilezo kuphela izinguquko ozenzayo.
Njalo lapho indawo ethile yempilo yakho iba yimbi kancane, thola ngokushesha ukuthi kungani uyixazulule.
Futhi umane uye emuva naphambili, ulinganisa noma yikuphi ukwanda nanoma yikuphi ukwehla. Lapho kukhona okuba kubi kakhulu, uzothola ukuthi kukhona ushintsho olwenziwe kuleyo ndawo futhi ulusingatha kangcono lolo shintsho ngokushesha. Futhi lapho uthola noma yini engcono, uthola kangcono ukuthi ikwenza ngcono kanjani futhi ukuqinise (kukuqinise noma kukhuphule) lokho.
Thatha isibonelo sodokotela wezilwane (umuntu oqeqeshiwe onakekela izilwane ezigulayo noma ezilimele). I-veterinary practice yakhe yezilwane iseSimweni Esijwayelekile. Yize evule izinyanga ezimbalwa phambilini, izilwane eziningi ziyalethwa kuye ngamalungu omphakathi. Umholo wakhe uphezulu futhi izilwane azinakekelayo zenza kahle kakhulu.
Isinyathelo sokuqala asenzayo asishintshi lutho. Ugcina kuzo zonke izenzo zokuphromotha abekade ezenza, futhi lokhu kufaka ukubamba umhlangano wamahhala wamasonto onke ngempilo yezilwane. Ubesanda kuqasha umsebenzi wakhe wokuqala bese efaka ifoni yezimo eziphuthumayo, ethandwa kakhulu. Akazishintshi lezi zenzo.
Ulandela yonke imithetho yokwenza umkhuba futhi unakekela zonke izilwane azibonayo. Akadingi isiyalo kwabanye. Ngakho-ke izimiso zokuziphatha zimnene.
Okulandelayo kumele alandele isinyathelo sesithathu: “Njalo uma kwanda endaweni ethile yempilo yakho, kubheke ngokucophelela bese uthola ukuthi yini eyenze kwangcono. Futhi-ke yenza lokho ngaphandle kokulahla obukwenza ngaphambilini. Yizo kuphela izinguquko ozenzayo.” Ubheka ukuthi yini ebangele lokhu kwanda kwamuva futhi uthola ukuthi ubesekwenzile ukusebenza kwakhe kahle ngemuva kokuthatha i-training course yakusihlwa. Uqhubeka nekilasi leviki, ngaphandle kokulahla ezinye izenzo.
Ekugcineni, udokotela wezilwane uyaqaphela ukuthi kunendawo eyodwa kuphela engaphansi kancane kugrafu yakhe—inani lokudluliselwa kwamakhasimende (abanikazi bezilwane abanelisekile abatshela abangane ukuba beze nezilwane ezifuywayo kuye). Ngenkathi okunye ukukhushulwa kuphumelela, bambalwa abantu abatshela abangane babo ngaye.
Usebenzisa isinyathelo 4: “Njalo lapho indawo ethile yempilo yakho iba mbi, thola ngokushesha ukuthi kungani bese uyilungise.” Uthola ukuthi ubeseyekile ukunika umnikazi wesilwane ngasinye obefika ezombona izinto zokukhangisa zamahhala zabangani babo. Ngokushesha ubuyisela lesi senzo ngaphakathi futhi ukudluliselwa kuyenyuka.
Ugcwalisa ngempumelelo iFomula Ejwayelekile ngomkhuba wakhe wezilwane.